VaMugabe Votadzisa Kuzeyiwa kweNyaya dzeSarudzo?
Chikumi 26, 2013
HARARE — Dare repamusorosoro ratadza kuenderera mberi neChitatu richizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo nepamusana pekuti mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, avo vakaenda ku Singapore kunorapwa, vanga vasina kumiririrwa mudare iri.
Izvi zvinotevera zvikumbiro zvakasvitswa kudare nemutungamiri wehuruende, vanove zvakare mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutungamiri weMDC diki, Va Welshman Ncube, avo vari kuda kuti sarudzo dzisaitwe musi wa 31 Chikunguru sezvakazivisa naVaMugabe.
VaMugabe vakazivisawo zvakare kuti dare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo idzi richagara nechishanu.
Gweta ranga rakamirira gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, Va Fred Gijima, vaudza dare iri kuti vari kupikisa zvikumbiro zvaVa Tsvangirai naVaNcube.
Asi vati havakwanise kuenderera mberi mudare sezvo vasina mashoko avakaudzwa naVaMugabe kuti vasvitse kudare. Izvi zvinotevera kudomwa kwakaitwa VaMugabe mumapepa akasvitswa kudare naVa Ncube.
Dare iri rati nyaya yakakwidzwa kudare naVa Nixon Nyikadzino vachikumbira kuti mazuva esarudzo apfuudzirwe mberi ibatanidzwe nenyaya yaVa Tsvangirai, Va Ncube pamwe naVa Chinamasa.
VaChinamasa vakasvitsawo chikumbiro chekuti sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru dzipfuudzirwe mberi kuti dzigozoitwa musi wa 14 Nyamavhuvhu izvo zviri kurambwa naVa Tsvangirai naVa Ncube vachiti hapana kuwirirana pamazuva aya sezvinodiwa nechibvumirano chezvematongerwo enyika.
VaNcube naVaTsvangirai vanoti SADC yakakurudzirawo kuti hurumende ikumbire matare mazuva anoikwanira kuita sarudzo.
Zvichakadai, dare repamusorosoro raturawo mutongo wekuti muzvinabhizinesi, VaMutumwa Mawere, vane kodzero dzekuvhota musarudzo dzemuZimbabwe zvichitevera kubvumwa kwaitwa nedare iri kuti pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika, VaMawere chizvarwa cheZimbabwe.
Dare rati zvakaitwa nemabharani mukuru wehurumende, Va Tobaiwa Mudede, zvekuramba kupa VaMawere chitupa hazvisi pamutemo uye zvinotyora kodzero dzavo dzekuvhota. Dare iri ratiwo hurumende haifanirwi kumanikidza VaMawere kutanga varasa zviri pamutemo mapepa avo ekuva chizvarwa cheimwe nyika kuitira kuti vapihwe chitupa chavo.